Nwelite ihe ndi Cayman Islands na COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Iwughachi » Nwelite ihe ndi Cayman Islands na COVID-19
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cayman Islands • News • Iwughachi • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Nwelite oru Cayman Islands
Na Mọnde, Mee 11, 2020, mmelite ọrụ Cayman Islands na Covid-19 e gosipụtara na nnọkọ ogbako na-ekwupụta na ikpe atọ dị mma na ihe ọjọọ 761. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ abụọ na-anya ebe na-enyocha 300 kwa ụbọchị. N'etiti HSA, CTMH Doctors Hospital na Health City Cayman Islands nyocha nke ụbọchị ọ bụla bụ 450.
Ọzọkwa, ụlọ ọgwụ abụọ na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji ha.
Onye ụkọchukwu Kathy Ebanks duziri ekpere kwa ụbọchị.
Onye Nlekọta Ahụike, Dr. Samuel Williams-Rodriquez kọrọ, sị:
Site na nsonaazụ ule 764 iji kọọ taa, 761 adịghị mma na atọ dị mma. N'ime ndị a, otu bụ kọntaktị nke mara ezigbo ndidi na ọ bụ asymptomatic; ndị nke ọzọ bụ akụkụ nke nyocha na-aga n'ihu ma ha abụọ enweghị nsogbu.
620 nke ule 764 a kọrọ na taa ka ahaziri na ụlọ nyocha HSA na 144 nọ na Hospitallọ Ọgwụ Dọkịta. Ndị a bụ nchikota nsonaazụ nyocha nke ngalaba dị iche iche nke ọnụọgụ na nyocha nyocha nke Ahụike Ọha na-eduzi.
Nlekọta Superlọ Ahịa Kirk nọ na mmekọrịta chiri anya na Ahụike Ọha na mmadụ 121 na-anwale ruo ugbu a; Pasent “dị oke ala” bụ ndị dị mma yana site na njedebe nke echi (Tuesday), atụmatụ ahụ bụ iji mezue ule nke onye ọ bụla na nnukwu ụlọ ahịa. Nlele niile ka HSA duziri. Emere nhicha miri emi site na nnukwu ụlọ ahịa, nke Ngalaba Na-ahụ Maka Gburugburu Ebe obibi. HSA na Hospitallọ Ọgwụ Dọkịta ga-aga n'ihu ịme nyocha maka ndị ọrụ ndị ọzọ.
Site na nyocha 84 dị ugbu a, 47 agbakeela, 36 bụ ndị ọrịa na-arụsi ọrụ ike na enweghị ndị ọrịa kwetara.
'Lọọgwụ 'Flu clinic na Fraịde hụrụ ndị ọrịa iri, 10 na Satọde na 5 na Sọnde; na 'Flu Hotline natara oku 2 na Fraịde, 23 na Saturday na 23 na Sọnde.
Ka ọ dị ugbu a, enwere mmadụ iri ise na ise na ụlọ ọrụ dị iche iche gọọmentị na ndị mmadụ nyocha 95 Ọha Health.
Onu ogugu mmadu 4,187 ka anwaleworo na agwaetiti Cayman rue ugbua.
Ndị mmadụ na-azụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa ahụ ekwesịghị ichegbu onwe ha ma ọ bụrụ na ha agbasoro usoro iwu niile edepụtara: ịnọgide na-enwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yi ihe mkpuchi ihu ma ghara imetụ ihu ha aka; ma saa aka ha nke ọma mgbe ha laruru.
Ulo oru abuo maka nleba anya hu ndi mmadu 300 kwa ubochi. HSA na-agakwa nnukwu ụlọ ọrụ na-eme nyocha ebe ahụ, ha abụọ ga-aga n'ihu.
N'oge a, enweghị atụmatụ iji nwalee agwaetiti ahụ niile. Ihe a na-elekwasị anya bụ ndị nwere mmekọrịta ka ukwuu n'etiti ọha na eze dịka ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ahụike, nnukwu ụlọ ahịa, ọdụ mmanụ na ebe a na-ere ọgwụ. Ọzọkwa ule nke Cayman Brac screenings na-aga n'ihu.
Emebeghị ụlọ mkpọrọ ahụ maka nyocha; otu o sila dị, ọtụtụ ndị-ọrụ ụlọ-mkpọrọ arụzuwo kwa tinyere ụfọdụ ndị-mkpọrọ; ọ dịghị onye nwalere mma n'oge a.
N'ime ụlọ ọrụ ahụ, ebumnuche bụ iji mezue nyocha 450 kwa ụbọchị.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-aga n'ihu na-anwale ihe dị mma "dị oke ala".
Ndị bịarutere kwesịrị ịnọ na iche iche maka ụbọchị 14, mgbe nke ahụ gasịrị, ha ga-anwale ihe ọjọọ ka ahapụ ha n'ime obodo.
Nkwado kọntaktị a na-agbaso na-adabere na nduzi mba ụwa ma na-ekpuchi mmadụ niile nọ n'ụlọ, yana ndị ọrụ ibe n'ime otu mita ma ọ bụ obere ihe dị nso nke onye ahụ dị mma maka 15 nkeji ma ọ bụ karịa. Yabụ n'ozuzu, a na-enyocha mmadụ 15-25 dị ka kọntaktị mgbe mmadụ na-anwale nke ọma.
Onye isi, Hon. Alden McLaughlin kwuru, sị:
Nsonaazụ na ngwụsị izu na ihe ọjọọ 761 bụ “ezigbo ihe agbamume” ma gosipụta nrụpụta ọrụ nyocha na nke usoro dị ugbu a iji merie nje ahụ na agwaetiti Cayman.
Agbanyeghị, ọ ga-ekwukwa na ọnọdụ atọ ndị a enweghị atụ, na-eme ka a mata echiche na enwere ike ịpụta karịa na obodo. Nke a na-egosiputa na imeghari oru ndi ozo kwesiri ime site na usoro ma obughi n'abali. Ihe mgbochi a na-arụ ọrụ. A na-achọ inwe ndidi.
Akụkụ ọzọ a ga - emepe, mana nke nta nke nta ma bido, bụ ụlọ ọrụ mmepe na ụlọ, nke ga - ahapụ ndị ọrụ 8,000. Nke a ga - agbanwe akụ na ụba ma kwado ọrụ na Islands na izu ndị na - abịanụ.
A ga-ekwuputa atụmatụ maka nyocha ndị ọrụ na-ewu ụlọ n'oge na-adịghị anya. Iji maa atụ, a ga-etinye ebe ndị na-ehicha ihe n’ebe a na-ewu ụlọ ka ndị ọrụ nwee ike ịkwọ aka, nweta ma rie nri nke ga-eme ka ndị ọrụ ibe ha nwee nsogbu.
Ulo oru uzo abuo nke ugbua ugbua amalitela oru. Lee sidebar n'okpuru maka nkọwa.
Ọzọkwa, iji kwado ebe nchekwa ụlọ ga-emeghe na usoro ọzọ, nke dị na izu ọzọ, dabere na nsonaazụ nyocha na-aga n'ihu na Grand Cayman. Mbugharị a ga-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị ahịa na-azụ ahịa n'ime ụlọ ma yabụ ihe egwu maka nnyefe obodo. A ga-etinye iwu ịgbatị anụ ahụ n'ọrụ.
N'agbanyeghị nrụgide na-adịghị ada ada imeghe agwaetiti Cayman na akụnụba ya, "ụkpụrụ" nke gọọmentị na-aga n'ihu na "ndụ dị oke ọnụ" yana ya mere nlezianya erute ọnọdụ dị ugbu a na àjà ndị mmadụ agaghị atụfu site na imeghe ọtụtụ mmadụ. A pụrụ ịmụta ihe site na mpaghara ndị ọzọ na-emepe obodo ha.
A ga-arịọrịrị ndidi obodo ka ebumnuche ya bụ ka e mepee “obere oge” mana n'ụzọ akpachara anya.
Nnwale na nyocha dị na usoro na atụmatụ gọọmentị banyere mgbochi nje na-arụ ọrụ, ọkachasị site na usoro nnwale siri ike ya na mmụba nke nyocha.
Nnwale nke onye ọ bụla Cayman so na ndị kachasị elu 15 n'ụwa.
Banyere ụgbọ elu ịgbapụ, obere ọnụ ọgụgụ nke oche na ụgbọ elu Dominican Republic emere maka Sọnde, 17 Mee dị. Maka ndoputa, kpọtụrụ Cayman Airways ozugbo na 949-2311 ma ọ bụ tinye akwụkwọ na weebụsaịtị CAL.
UK na-ebute ụzọ na mbido ọgwụ mgbochi. “UK bụ otu n’ime ndị nyere onyinye na njikọ ụwa zuru oke maka ọgwụ mgbochi na ọgwụ mgbochi, nke a maara dị ka Gavi. Site na 4-5 June, UK ga anabata ulo nzuko Global Vaccine, na-achikota obodo na ndi otu ichoro ndu U UK na itinye aka na oru Gavi.
O nyere ndị otu gọọmentị nyocha na-arụ ọrụ n'ime obodo maka ọrụ ha na-arụ na nzaghachi COVID-19 site na ibute ụzọ na ịrụ ọrụ n'ụzọ dị mfe.
Onye ozi nyere mkpu na Popeye na Burger King maka inye HSA nri na Grand Cayman na Star Island maka ịnye ndị ọrụ ụlọ ọgwụ Faith na Cayman Brac nri.
Islọ ọrụ ụlọ ọgwụ 60-bed dị njikere ma dị njikere maka ojiji, ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Maka nkọwa, lee sidebar n'okpuru.
Kọmishọna ndị uwe ojii, Maazị Derek Byrne na-echetara ọha na eze:
Site na mwepụ nke mgbochi ị ga-egbochi Little Cayman na Cayman Brac n'izu gara aga, iwu ịmachi iwu a ka dị ruo 15 Mee 2020 na 5am.
Oge ị ga na-arụ ọrụ dị n etiti elekere ise nke ụtụtụ na elekere asatọ nke ụtụtụ kwa ụbọchị Mọnde ruo Satọde.
Hard Curfew ma ọ bụ mkpọchi zuru oke, chekwaa maka ndị ọrụ ọrụ dị mkpa ewepụrụ na-arụ ọrụ na Cayman Brac n'etiti elekere 8 nke abalị na 5am nke abalị Monday ruo Sunday. Na Grand Cayman, ọ na-enye iwu ị ga-apụ n’abalị elekere asatọ nke ụtụtụ na elekere ise nke ụtụtụ n’abalị Mọnde ruo Sọnde tinye ya na elekere elekere iri abụọ na anọ na Sọnde - site n’abalị Satọdee rue etiti abalị Sunday.
A na-ahapụ oge mgbatị ahụ karịa nkeji 90 n'etiti elekere 5.15am ruo 7pm kwa ụbọchị Mọnde ruo Satọde. A naghị ekwe ka oge mmega ahụ rute na Sọnde n'oge oge ngagharị. Nke a metụtara Grand Cayman naanị ka ewepụrụ mgbochi ndị a na Cayman Brac na Little Cayman.
Oge ngagharị zuru oke nke awa 24 dịka ọ metụtara Beach Access to Public Beach na Grand Cayman ka dị ebe ruo Fraịdee, 15 Mee na 5am. Nke a pụtara enweghị ohere ịnweta osimiri ọha na eze na GC n'oge ọ bụla ruo Fraịdee 15 Mee na 5am. Nke a machibidoro mmadụ ọ bụla ịbanye, ịga ije, igwu mmiri, nsị, ịkụ azụ, ma ọ bụ itinye aka n'ụdị ọrụ mmiri ọ bụla n'ụsọ osimiri ọ bụla na Grand Cayman. Ewepụrụ mmachi a na Cayman Brac na Tọzdee, mgbede Mee 7.
Imebi usoro iwu siri ike na-achịkwa bụ mmebi iwu na-ebu ntaramahụhụ nke $ 3,000 KYD na mkpọrọ maka otu afọ, ma ọ bụ ha abụọ.
Sidebar: Premier Outlines HSA Mgbasawanye nke COVID Ike Ule
Ndị Ọrụ Ahụike agbatịwo ikike nyocha ha maka nyocha COVID-19 na oghere nke abụọ draịva site n'ụlọ nyocha maka ndị ọrụ na mbido na mgbasawanye nke ụlọ nyocha ha iji mee ka nhazi nke ihe atụ dịkwuo n'otu ụbọchị.
Onye isi oche HSA Lizzette Yearwood kwuru na obi dị ya ụtọ na otu draịva gafere site na nyocha izu gara aga. “E nwere ọtụtụ lọjistik na usoro na usoro iji hụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma dị ka o kwere mee.”
Mgbe ị bịarutere na ụgbọala HSA site na mpaghara nyocha, usoro niile na-ewe ihe dị ka nkeji 5.
HSA agbatịwokwa ebe nyocha nke anụ ahụ na manlọ Ọgwụ Cayman Islands, soro ya na ụlọ ọrụ nkeonwe rụkọọ ọrụ ma goro ma zụọ ndị ọrụ ụlọ nyocha ọzọ iji nwekwuo ikike nyocha. “Ọ bụ nnukwu mgbalị sitere n’aka ọtụtụ mmadụ iji mee ka anyị rute ebe a, ma anyị gara n’ihu ileba anya n’ụzọ ga-esi nwekwuo ikike nnwale, kwuru Yearwood. "Ndị a ọhụrụ ndozi na expansions bụ ịrịba nzọụkwụ dị mma na ụzọ dịkwuo ule."
Ahụike Ọha na-ahazi oge a kara aka na ndị ọrụ na-arụ ọrụ maka ọdịnihu n'ọdịnihu ebe mbọ nnwale ahụ jubigoro. A na-ahazi ndị ọrụ na-arụ ọrụ nke oge 2 na ọnụọgụ ndị ọrụ na-ewu ụlọ maka nyocha. HSA, Ahụike Ọha, na Onye Nlekọta Ahụike Na-arụkọ ọrụ ọnụ iji butere ndị mmadụ ma ọ bụ azụmaahịa ụzọ bụ ndị a na-ewere dị ka ndị ọrụ dị mkpa dị mkpa.
“E nwere ọtụtụ puku mmadụ ndị a na-ewere dị ka ndị na-arụ ọrụ n'ihu, n'ihi ya, ọ ga-ewe izu ole na ole iji gafee ọtụtụ. Anyị ghọtara na enwere nchekasị n'ozuzu mmadụ ka a nwalee ya n'ihi ya, anyị na-eme mgbalị niile iji nyochaa ọtụtụ ndị tozuru etozu dị ka o kwere mee, "Dr. Samuel Williams-Rodriguez, Onye Ọrụ Ahụike nke Ahụike kwuru. "Na mgbakwunye na ịkwọ ụgbọala site na nyocha, ndị otu sitere na Ahụike Ọha na-eduzi nyocha na saịtị maka azụmaahịa buru ibu, nke na-enyere ndị ọrụ aka ịmachi na-enweghị ịhapụ ebe ọrụ."
Ndị mmadụ na-enyocha maka COVID-19 ga-enweta nsonaazụ site na ntanetị MyHSA Ndabere, nke na-enye usoro echekwara iji nweta nsonaazụ ụlọ nyocha. Ahụike Ọha ga-aga n'ihu ịkpọtụrụ onye ọ bụla nwalere COVID site na ekwentị. A ga-enye ndị niile nyochara ego maka njikwa ọnụego onye ọrịa n'efu.
Dika oria COVID bu nsogbu obodo, HSA na aru oru ya na ndi ulo ogwu nke ndi mmadu no na nyocha iji choputa otutu ndi oru di nkpa dika o kwere mee.
Dr Samuel Williams-Rodriguez, Onye Ọrụ Ahụike na Ahụike kwuru, "Anyị na-arụ ọrụ ugbu a na ctorslọ Ọgwụ Dọkịta site na iziga ha azụmaahịa dị iche iche ka enyochae n'ime mbọ iji hụ na ha bulitere ikike nyocha ha." "Health City Cayman Islands ga-abụ ihe ọzọ echetakwa na saịtị ahụ maka ndị ọrụ dị mkpa na Eastern Distrikti."
Screenlọ ọrụ nyocha niile bụ site na nhọpụta naanị na Ọha Ahụike ga-akpọtụrụ ndị azụmaahịa maka oge a kara aka.
Sidebar 2: Minister Seymour gosipụtara High Life Life Alternate Medical Center
“Anyị nwere ike ikweta na ọrịa a gbasatara COVID-19 abụrụla ihe mmụta maka anyị niile, ọkachasị ndị a gọziri agọzi ije ozi n’ime gọọmentị. Anyị aghaghị ịmụta ime mgbanwe ngwa ngwa ka ozi na-amalite mgbe anyị na-ekepụta atụmatụ dabara adaba maka mba anyị. N'ime atụmatụ ndị a bụ ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ubi nke ga-anabatacha oke ndị ọrịa COVID-19 kwesịrị ka ụlọ ọrụ ahụike anyị nwee ike.
Na Fraịde, ndị otu Kọmitii Ọrụ Mberede Mba ma ọ bụ NEOC, ndị isi sitere na HSA na ndị dọkịta ndị ọzọ gagharịrị na Family Life Alternate Medical Center. Beenlọ ihe eji edozi iri isii a ka enyere ndị ọrịa ụlọ ma ọ bụrụ na a laghachite na ikpe COVID-19. Ọ bụ ezie na anyị ji ezi obi na-atụ anya ma na-ekpe ekpere ka anyị ghara inwe ọtụtụ ndị chọrọ ụlọ ọgwụ, ịkwadebe maka ọnọdụ dị otu a dị mkpa maka ịzọpụta ndụ.
Achọpụtara ụlọ ọgwụ dị n'ọhịa dị ka usoro 4 na-eme na Cayman Islands Clinical Guidance maka COVID-19 Management. A tụlere ọtụtụ ụlọ ọrụ, na Family Life Center gosipụtara na ọ bụ ihe kachasị mma dabere na nha, ikuku zuru oke, yana nso na manlọ Ọgwụ Cayman Islands. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ụlọ ọrụ ahụ ga-achọ ndị ọrụ 120, ma ndị na-agwọ ọrịa na ndị na-abụghị ndị na-agwọ ọrịa, iji rụọ ọrụ zuru oke. Ndị Family Life Alternate Medical Center ga-achịkwa Dr. Delroy Jefferson, HSA Medical Director; Dr. Elizabeth McLaughlin, HSA Isi nke Mberede na Mberede; na Gillian Barlow, Onye Nlekọta Nọọsụ HSA.
Emeela ka Family Life Alternate Medical Center nwee mmekọrịta site na mmekọrịta mmekọrịta ọha na nke ụlọ ọrụ. Ihe ngosi pụrụ iche na-enye Mazi Simon Griffiths nke ngalaba Ọha na-ahụ maka Ọha na-ahụ maka ọrụ ahụ ma soro HSA Clinical Task Force, NEOC rụọ ọrụ nke ọma, na Graeme Jackson NEOC onye njikwa ọrụ, yana ndị na-ahụ maka ahụike iji hụ na ihe niile gbasara ahụike ga-ezute. .
Anyị ga-achọ igosipụta ekele anyị nwere n’ebe Pastorkọchukwu Alson Ebanks na ọgbakọ ya dị maka inye Family Life Center. ”
Ihe ekwuru ụnyaahụ na Cayman Islands Official Update.